Induction Heating Theory na teknụzụ, kedu ihe induction kpo oku
Ọkụ na-egbuke egbuke bụ usoro na-enweghị ọkụ, na-enweghị kọntaktị na-ekpo ọkụ nke nwere ike ịgbanye akụkụ a kapịrị ọnụ nke cherry mmanya na-acha uhie uhie na sekọnd. a na-ebute, nke ugbu a, nke dị ugbu a) n'ime ihe eji arụ ọrụ (ihe na-eduzi), a na-ewepụta okpomọkụ ka eddy ugbu a na-aga n'ihu na resitivity nke ihe.
Ugbo oku bụ ngwa ngwa, dị ọcha, nke anaghị emerụ emerụ nke enwere ike iji kpoo ọla ma ọ bụ gbanwee akụrụngwa ihe. Igwe ihe mkpuchi ahụ anaghị ekpo ọkụ ma a na-achịkwa nsonaazụ kpo oku. Teknụzụ steeti transistor siri ike emeela ka ikpo ọkụ kpo oku dị mfe karị, kpo oku maka ịdị ngwa maka induction brazing, heat treatment, induction melting, shrink fitting, induction forging etc.
A na-eji ihe ntinye ntinye ahaziri iche wee jikọta ya na ike ọkụ ọkụ na-ewepụta ihe nrụpụta a na-emegharị ugboro ugboro maka ngwa achọrọ. Ihe ntinye ike nke emeputara ka eweputa ihe eji eme ka ihe di nma ma megharia ihe ndi ozo n'oge mgbanwe oku na-eme ka otutu ihe omuma kpo oku site na otu ngwa oku.
Nzube nke itinye n'ọkwa kpo oku nwere ike ịbụ ike akụkụ iji gbochie iyi; mee ka plastik ígwè mee ihe maka ịkpụcha ma ọ bụ nke na-ekpo ọkụ ka ọ bụrụ ụdị a chọrọ; braze ma ọ bụ ree abụọ akụkụ; gbazee ma gwakọta ihe ndị na-abanye n'ime alloy dị elu, na-eme ka ụgbọelu nke ụgbọelu nwee ike; ma ọ bụ maka ọnụọgụ ọ bụla nke ngwa ndị ọzọ.